Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Aviation » Airbus ayaa ku dhawaaqday noocooda koowaad ee deegaanka
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Investments • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Technology • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka
Wing of Tomorrow, oo ay qayb ka tahay maal-gelinta Machadka Teknolojiyadda Aerospace ee Boqortooyada Midowday, waa barnaamij dhammaystiran oo Airbus ah oo ku lug leh la-hawlgalayaasha caalamiga ah iyo kooxaha ka socda dhammaan goobaha Airbus ee Yurub, oo ay ku jirto Bremen oo Jarmal ah, halkaas oo kooxda 'Wing Moveables' ay saldhig u tahay. Saddexda mudaaharaad ee garabka ayaa isu keeni doona in ka badan 100 teknolojiyad cusub si ay u sahamiyaan farsamooyinka wax -soo -saarka iyo isku -dhafka cusub iyada oo hadafku yahay in duulimaadku noqdo mid waara.
'Garabka Berrito' wuxuu gaarayaa guul muhiim ah oo ka soo uruurinta qaabkii ugu horreeyay ee baalal-cabbir buuxa ah.
Barnaamijka cusub ee Airbus wuxuu kor u qaadi doonaa fahamka waxsoosaarka garabka iyo warshadeynta.
Saddex baalal tusmo oo buuxa ayaa la soo saari doonaa guud ahaan barnaamijka 'Garabka Berri'.
'Garabka Berri', oo ah barnaamij weyn oo cilmi-baaris iyo tiknolojiyad Airbus ah, ayaa gaaray heer muhiim ah oo ay la gashay ururinta nooca ugu horreeya ee baalka oo dhan.
Barnaamijka Garabka Berri ma tijaabin doono oo keliya agabkii ugu dambeeyay ee isku -darka iyo teknolojiyadda cusub ee aerodynamics -ka iyo qaab -dhismeedka garabka laakiin, muhiimad ahaan, sahaminta sida wax -soo -saarka garabka iyo warshadeynta loo horumarin karo si loo daboolo baahida mustaqbalka maaddaama ay waaxdu ka soo baxdo masiibada.
Seddex baalal oo cabiraad buuxa ah ayaa la soo saari doonaa wadar ahaan: mid ayaa loo isticmaali doonaa in lagu fahmo isdhexgalka nidaamyada; ilbidhiqsi ayaa qaab ahaan loo tijaabin doonaa si loo barbardhigo qaabaynta kombiyuutarka, halka saddex meelood meel la soo ururin doono si loo tijaabiyo wax-soo-saarka kor-u-qaadista iyo isbarbardhigga ka dhanka ah qaabaynta warshadaha.
Sabine Klaauke, Airbus Sarkaalka Sare ee Farsamada, ayaa yiri: “Garabka Berrito, oo ah qeyb muhiim ah oo ka mid ah Airbus 'R&T portfolio, ayaa naga caawin doonta qiimeynta suuragalnimada warshadaha ee wax soo saarka garabka mustaqbalka. Tiknoolajiyadda garabka oo aad u shaqeyneysa waa mid ka mid ah xalal dhowr ah-oo ay weheliyaan shidaalka duulista ee joogtada ah iyo hydrogen-waxaan hirgelin karnaa si aan gacan uga geysanno hamiga dearbonization-ka ee duulista. Wing of Tomorrow ayaa sidoo kale tusaale u ah sida wadashaqaynta warshadaha ee baaxadda leh ay muhiim u noqon doonto si loo gaaro ajandaha waaxdeenna ee mustaqbal waara. ”
Wing of Tomorrow, oo ay qayb ka tahay maal-gelinta Machadka Teknolojiyadda Aerospace ee Boqortooyada Midowday, waa barnaamij dhammaystiran oo Airbus ah oo ku lug leh la-hawlgalayaasha caalamiga ah iyo kooxaha ku baahsan goobaha Yurub ee Airbus, oo ay ku jiraan Bremen gudaha Jarmalka, halkaas oo kooxda 'Wing Moveables' ay saldhig u tahay. Saddexda mudaaharaad ee garabka ayaa isu keeni doona in ka badan 100 teknolojiyad cusub si ay u sahamiyaan farsamooyinka wax -soo -saarka iyo isku -dhafka cusub iyada oo hadafku yahay in duulimaadku noqdo mid waara.
Qayb-hoosaadka daboolka baalasha kakan ayaa ka dhacay goobta Airbus 'Filton, England, iyadoo lagu soo saaray Xarunta Isku-dhafka Qaranka ee Bristol. Daboolka baalka iyo qayb weyn oo ka mid ah GKN Aerospace-the Trailing Edge Fixed-ayaa la geeyey Xarunta Cilmi-baarista Wax-soo-saarka Sare, Wales, xarun ku taal warshad-soo-saarka baalka ee Airbus oo ku taal Broughton, Flintshire, si kulanku u bilowdo.